Youtube: Ndeipi Yako Vhidhiyo Strategiki Ikoko? | Martech Zone
Isu tinogara takaisa pfungwa pazvikanganiso kana zvasvika kune vatengi vedu 'dhijitari rekushambadzira zano. Majini ekutsvaga haasi chete chiteshi chevemabhizimusi nevatengi kuti vawane mabrands avanotsvaga, maalgorithms zvakare chiratidzo chinoshamisa chechiremera chechiremera pamhepo. Sezvo isu tichiongorora izvo zvirimo zvinotyaira kutarisa kune iyo brand, isu tinofananidza zvirimo pane yega yega nzvimbo yemukwikwidzi kuti tione kuti misiyano chii.
Kazhinji, mumwe wevaya vanosiyanisa ndizvo Video. Kune akati wandei mhando dzemavhidhiyo izvo zvinogona kugadzirwa, asi anotsanangura mavhidhiyo, sei-kumavhidhiyo, uye vatengi zvipupuriro ndizvo zvinonyanya kukanganisa mabhizinesi. Sei-ku uye masitayera mavhidhiyo pa #YouTube anogamuchira avhareji e8,332 maonero, iro rinozivikanwa chikamu chiri padyo nemavhidhiyo evaraidzo.
Kana iri nguva yekukwikwidza nevhidhiyo zvemukati, ini ndinokurudzira kambani yako kuisa pamwechete yakaenzana zano:
Isa parutivi bhajeti rakakosha re anotsanangura video zviri kusvika pamaminetsi maviri kureba. Rangarira kuti vhidhiyo iyi iri kunamatira newe kwechinguva, saka kuve nechokwadi kwekumaka kwakaringana, kubvisa chero nguva-yakatarwa kutaurwa, uye kuseka ramangwana raizove zano rakakura. Vhidhiyo yehupenyu inoita mushe ingave $ 2k kusvika $ 5k - asi kudzoka kukuru pane kudyara.
Tora mukana wese waunokwanisa kutora firimu zvipupuriro mavhidhiyo. Kunyangwe kana zvichireva kuti iwe unohaya vashandi vemafirimu uye wozvitumira kune ako vatengi, iwe unofanirwa kunyatsoisa mari mairi. Uchapupu zviratidzo zvekutenda izvo zvisingakwanise kurohwa. Ivo vanogona zvakare kudzoreredzwa kune zvakanyorwa zvemukati mune ese ako edhijitari uye anodhinda masvikiro. Usarerutse simba rekupupurira kwemanzwiro pane yako kambani.
Shanda pane kufunga mavhidhiyo ehutungamiriri izvo zvinovhenekesa zviwanikwa zvevanhu uye tsika yekambani yako inokusiyanisa iwe kubva kune vanokwikwidza. Zvekuita nemazvo, isu tinowanzo kuronga zuva rese kana maviri ekupfura kwevatungamiriri vebhizinesi. Nekuita izvi, tinogona kugadzira mavhidhiyo anotarisisa anotarisa pamunhu mumwe chete panguva, kana tinogona kusanganisa nekuenzanisa mavhidhiyo ehurukuro pane dzakasiyana nhaurwa.
Usakanganwa kuti mavhidhiyo haangove eanonakidza epamhepo saiti yako, Youtube pachayo inoenderera ichitungamira kutsvaga kwepamhepo padhuze neGoogle. Gadzirira yako Youtube chiteshi uye yega yega mavhidhiyo ako ekukanganisa kwakanyanya. Gadzira mamwe mavhidhiyo nguva nenguva kuti uvake vanyore uye utange nharaunda yako wega.
Chii chakakomberedza kona? Rarama video. Youtube iri kusvetuka misoro kutanga mumutambo wekumhanya wega. Tichiri kutanga, asi dzimwe nguva ndiyo nguva yakanakisa yekusvetukira mune tekinoroji iri kubuda. Makambani makuru asati aisa mari, mabhizinesi madiki anonamira anogona kutora mukana uye kutyaira imwe chikamu chakakura chemusika. Chaizvoizvo kubhejera - asi isu takaiona ichibhadhara nekudzokororazve.
Iyi infographic kubva Kutaridzika Z Studios ichakupa muongororwo wekuti yakakosha sei chiteshi ichi kana uchishanda nevhidhiyo.
Tags: mutengi uchapupu mavhidhiyoanotsanangura videosei-vhidhiyoiri youtube chaiyo kune vateereri vakolive streamzvipupuriro mavhidhiyokufunga mavhidhiyo ehutungamiririmhando dzevhidhiyomavhidhiyo manhambayYouTubeyoutube live
5 Dhizaini Elements iyo Inoshanda Zvakanaka kune Nhare Yekutendeuka
Jul 17, 2017 pa 7: 53 AM
Ndinoda YouTube. Ini ndinoshandisa zvakare zvemukati kubva kuFacebook Live zvakananga kune saiti. Ini ndinogona kuzogadzika mavhidhiyo kubva ipapo kuenda kunzvimbo dzangu dziripo.
YouTube Live inzira yakanaka yekuvaka nharaunda nekukurumidza, uye kusiyana neFacebook, uko vanhu variko, nekuda kwezvikonzero zvakasiyana, ndinoziva zvechokwadi kuti vanhu vari kuYouTube nechinangwa chimwe chete. kutarisa vhidhiyo. Kune vateereri vakazvitsaurira, uye nehurukuro dzekurarama, zvinoita kuti ruzivo rwacho ruwedzere. Ndakaona 6 awa anorarama hova dzaishamisa dzaive dzakabudirira.